Sabboontota Ukkaamsuun Hammaate; Ummatis Warraaqsa Diddaa fi Fincilaa Finiinsu Qaba. | QEERROO
Sabboontota Ukkaamsuun Hammaate; Ummatis Warraaqsa Diddaa fi Fincilaa Finiinsu Qaba.
Posted on May 21, 2012 by Qeerroo
(Qeerroo, Finfinnee, 21 Caamsaa 2012) Mootummaan abbaa irree Mallas Zeenaawwii ilmaan Oromoo ukkaamsee hidhe hiraarsaa akka jiru saaxilame; amma illee sabboontota ukkaamsanii dhabamsiisuun itti fufee akka jiru ibsame.
Oduun naannoo Oromiyaa keessa nu ghaa jiru akka hubachiisutti, humnooti tikaa fi dabballooti Wayyaanee Oromoota ilaalchaa Oromummaa fi sabboonummaa qaban hordofuun ukkaamsanii gara dabarsuu fi hidhuutti jiran.
Akka kanaan, yeroo ammaa kanatti Manni hidhaa Ma’ikalaawwii kan baroota dheeraaf ilmaan Oromoo keessatti dararaa guddaa argaa jiran keessatti namooti hedduun dhoksaanii hiraarfamaa akka jiran beekamee jira.
Odeessi mana hidhaa Maa’ikalaawwii keessaa nu dhaqaabe akka addeessutti, ilaamn Oromoo hedduun Oromiyaa keessaa guuramanii maa’ikalaawwii keessatti dararaa argaa jiran hedduun ogeessa seeraa dhimma isaanii hordofu hin qaban.
Kana malees, namooti hedduun kanneen achitti hidhaman baadiyyaa fi kutaa biyyaa keessaa ukkamfamanii akan hidhaman waan ta’eef maatii fi firroottan isaaniitiin gaafatamaa hin jiran.
Oromoota Oromummaa isaaniitiin qabamanii maa’ikalaawwii keessatti hidhaa fi hiraarsaa keessa jiran hedduun garmalee waan reebamaniif socho’uu hin danda’an. Kaan isaanii halkan baasanii kan hiraarsan yoo ta’u, kaan immoo yeroo dheeraaf mana dukkanaa keessa waan turaniif waa arguu hin danda’an.
Namoota Maa’ikalawwii keessatti akka malee hiraarfamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii Qeerroo dhaqqabe:
1. Ob Isaayyas Geetahuun, bakki dhalootaa Godina lixaa Wallaggaa Gimbii, hojjetaa mootummaa lafa hojii magaalaa Neqamtee rraa qabame.
2.Ob Leellisaa Oliiqaa bakki dhalootaa Godinaa Bahaa Wallaaggaa magaalaa Neqamtee.
3. Ob Phaawuloos Taasfaayee bakki dhalootaa Godina lixaa Wallaaggaa Gimbii yoo ta’uu, hojjetaa bankii Awaash damee Sabbataa kan ta’ee biyyaa Ugaandaa deemtee leenjii fudhatee dhuftee jechuun himatame.
4. Ob Lammii Tasfaayee barataa Univesity Finfinnee dhalotaan Lixaa wallaaggaa Gimbii.
5. Ob Daraaraa Abdiisaa Godina lixa shawaa Onaa Jalduu
6. Ob Birruu Gaalatuu Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Adaa’aa Bargaa
7. Barataa Tolaa kan jedhamuu Yunivesitii Wallaggaa irraa kan qabame bakki dhalootaa Shawaa Bahaa, kan ta’e, fi Oromooti hedduun mana hidhaa maakkalawii keessatti hiraarafmaa jiran.
Kun kanaan otuu jiru, yeroo addaddaatti sababa Oromummaa ishiitiin hidhamtee hiraarfamaa kan turte Aadde Masarat Taaddasaa achi buuteen ishii dhabamuun maatii fi sabboontota hedduu yaaddessee jira.
Knaan duras sababa Oromummaa ishiitin bara 2007 calqaba irratti qabamtee ma’ikalaawwii keessatti hiraarfamaa erga turtee booda waggaa lamaaf ji’a saddeetin booda ragaa sobaa irratti qopheessuudhaan manni murtii Olaanaa yakka tokko malee waggaa 15 itti murteessee ture.
Haa ta’uuyyu malee,iyyannoo mana murtii walii galaatti dhiyaateen waggaa 5tti gadi buufamee akka hidhamtu ta’uu maddeen keenya nuuf ibsanii jiru.
Yeroo man hidhaa Qaallittii keessa turtettis namoota kaan irraa adda baafamtee hiraarfamaa kan turte, Aadde Masarat, erga hidhaa keessaa baatees hordoffiin hedduu akka ishii duuba ture illee beekuun danda’amee jira.
Keessayyuu, sochii Qeerroo keessaa qooda qabdi jechuun yeroo hedduu waamanii akka gaafachaa turan kan nuuf ibsan maddeen keenya yeroo ammaa bakak ishiin buute akka dhabanii jiran ibsuun qaamoti mirga dhala namaaf falman akka hordofan iyyannaa isaanii dabarsanii jiru.
Kana malees, barataa Tolasaa Kabbadaa achi buuteen isaan dhabamuu maddeen keenya nuuf ibsanii jiru. Barataan kunis yeroo hedduu, “sabboontota Oromoo ijaarta; ABOf hojjatta; Qeerroo Bilisummaa qindeessita, fi kkf ” jedhamee hidhamaa fi qoratamaa akka ture kan ibsan hiriyyoonni isaa, keessaayyuu, erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii fudhatuu eegalee hordoffii fi doorsisti itti hammachuu irraa guyyuu sodaa keessa seenee akka ture hubachiisanii jiru.
Yeroo ammaa kantti, sodaa fi bir’uu guddaa keessa kan seente Mootummaan Wayyaanee, ilmaan Oromoo sababa amantii fi ilaalchaan hordoftee ukkaamsuun bal’inaan itti fufee kan jira.
Haala kana irratti dhaamsi Qeerroo aghe akka hubachiisutti, keessayyuu kanneen biyya alaa irraa maallaqni ergamuuf maqaan isaanii gara warra tikaatti dursamee waan ergamuuf hordofiin guddaa karaa hedduun isaanitti jira.
Dhaamsi Qeerroo kun dabalees, “namooti maallaqni fira isaanii irraa ergamuuf, karaa hundaan hordofmaa fi basaasamaa jiran; kanaaf, jabeessanii akka of eegan ii fi sochii fi adeemsa idilee hin taane akka arganii fi hubataniin dursanii qaamota mirga dhala namaaf falmanitti beeksisuu qaban,” jedhee jira.
Qeerroonis, dhimma kana irratti yaadachiisa dabarseen, “ummati Oromoos amantii fi ilaalchaan otuu adda hinbahiin duula hundagaleessa Oromoo fi Oromummaa irratti labsame kana walirraa qolachuutti jabaatuu qaban,” jedhee jira.
“Diinni Oromoo yeroo kamitti iyyuu wan ittiin Oromoo cabsuu fi humna buusu hojjachuu irraa duubatti jedhee hin beeku,” kan jedhe dhaamsi Qeerroo, “Roorroo abbaatu ofirraa qolata waan ta’eef, ummanii Oromoo taa’ee du’uu hin qabu; bakka jirutti warraaqsa diddaa fi fincilaa eegale finiinsuun qe’ee fi ardaa isaa gaaddisa garboomfataa irraa bilisoomsuu qaba,” jechuun dhaamsa jabaa dabarsee jira.
2 thoughts on “Sabboontota Ukkaamsuun Hammaate; Ummatis Warraaqsa Diddaa fi Fincilaa Finiinsu Qaba.”
obsaa on May 21, 2012 at 7:45 pm said:
Woyyaaneen oromoota miidhuu irraa duubatti akka hinjenne beekamaa dha. sabboontonni haga dandaa’anitti harka woyyaanee akka hingalle eeggachuu qabu. dandaa’amnaan utuu hindursamiin dursuunis barbaachisaa dha. hamma ammaatti oromonni baay’een aarsaa bu’aa hinqabne ka kafalan jiru. kana jechuun ofeeggannoo utuu hingodhiin fedhii siyaasaa keessa isaanii jiru gowwummaan waan baasaniif harka diinaa bu’u. namni waa hojjetee qabamu homaa miti;bu’aa buusee jira waanta’eef. Kanaaf bu’aa fi kisaaraa madaalaa qabsoofna.
Oromiyaan in bilisoomti.
Qabsaa’an in kufa;qabsoon ittifufa.
Abdataa Rabbii on May 22, 2012 at 8:49 pm said:
fuuldurri injifannoodha haa jabaannuu
kaanniisa amaan dhuufun moo.ateef hin bitamnu
jijjiiramaaf haa qabsooynuuu